नामको पहिलो अक्षरबाटै यसरी थाहा पाउनुहोस छिट्टै प्रेममा पर्ने युवती – Hamro Nepali Samachar
Home/ बिबिध/नामको पहिलो अक्षरबाटै यसरी थाहा पाउनुहोस छिट्टै प्रेममा पर्ने युवती
नामको पहिलो अक्षरबाटै यसरी थाहा पाउनुहोस छिट्टै प्रेममा पर्ने युवती
प्रेम कसैले रंगका आधारमा गर्ने गर्छन् भने कसैले उचाईका आधारमा । कतिपयले त सुन्दरतामा पनि ध्यान दिएर प्रेम गर्ने गर्छन् । परिपक्कहरुले प्रेम गर्दा सोंच विचार गरेर मात्रै प्रेम प्रस्ताव राख्दछन् । भने कतिपयले जातका आधारमा पनि प्रेम गर्ने कि नगर्ने भनेर तय गर्दछन् । आखिर प्रेम जस्ले जसरी गरेतापनि यस्को निष्कर्श भनेकै विबाह हो।
र प्रेमको अन्त्य पनि विबाहमै गएर टुंगिने हो । प्रेमदेखि विवाहसम्म र भविष्य पनि सोचेर प्रेम गर्ने युवतीहरु कमै हुन्छन् । र जस्ले गर्छन् ती आफैमा बौद्धिक हुन्छन् । उनीहरुलाई समझदार मानिन्छ तर, पहिला नजरमा नै प्रेममा पर्ने युवतीहरु कस्ता हुन्छन् होला। उनीहरुको स्वभाव कस्तो हुन्छ। र उनीहरुको प्रेम कति समयसम्म टिक्छ त।
यो कुरा जान्नकोलागी एउट युवकलाई निकै नै गाह्रो कुरा हो । तरपनि जान्न सकिन्छ । पहिलो अक्षर A बाट आउने युवतीहरुको स्वाभाव इमोशनल हुन्छ । यिनीहरु कुनै युवकको अनुहार हेरेर नै प्रेममा पर्छन् । यस्ता युवतीहरु छिट्टै पा’र्टनरलाई विश्वास गर्छन् । ‘एक्स्ट्रा केयरिङ’ प्रकृतिका यस अक्षरवाली युवती जीवनभरी प’र्टनरको साथ छोड्दैनन् ।
त्यसैगरी B नामका युवतीहरु पनि निकै नै संवे’दनशील हुन्छन् । र, छिट्टै प्रेममा पर्छन् । उनीहरु आफ्नो साथीको बानीको बारेमा सचेत हुन्छन् । आफूले आशा गरेजस्तो नभएमा बिना साथी रहन पनि स्वीकार गर्छन् । G बाट नाम हुने युवती छिट्टै प्रेमको चक्क’रमा पर्छन् । पहिलो नजरमा नै प्रेममा पर्ने यस्ता युवतीहरु साँचो प्रेम गर्छन् ।
र जस्तो सुकै कठिन परिस्थितीमा पनि जीन्दगीभर साथ निभाउँछन् । त्यसैगरी M अक्षरबाट नाम आउने युवतीहरु पनि निकै नै दयालु हुन्छन् । उनीहरुपनि छिट्टो प्रेममा पर्छन् । जो उनीहरुको जीवनमा आउँछन् उनीहरुलाई जीवनभरी साथ छोड्दैनन् । P नाम भएका युवतीहरु पनि प्रेम विवाहमा विश्वास गर्छन् र छिट्टै प्रेममा पर्छन् ।
यिनीहरु आफ्नो पा’र्टनरलाई कहिल्यै धोका दिँदैनन् । यद्यपि, यिनीहरुले कहिल्यै साँचो प्रेम पाउँदैनन् । र अन्त्यमा T बाट नाम सुरु भएका युवती छिट्टै प्रेममा पर्छन् तर व्यक्त गर्नलाई हिच्किचाउँछन् । तर यिनीहरु आफ्नो प्रेम पाउनको लागि जे पनि गर्छन् । र जीन्दगीभर आफ्नो साथीको साथ छोड्दैनन् ।
नियमित यौ ‘ न सम्पर्क राख्ने व्यक्ति कमजोर हुन्छ कि झन् बलियो ? यस्तो छ अध्ययनको निष्कर्ष
म खाली गर्भवती हुनुको अनुभव लिन चाहान्छु ।
आफुले माया गर्ने मान्छेको माया कसरी पाउने ?
नागको अन्डा देख्ने मान्छेको भाग्य चम्किने ? भेटी स्वरुप ॐ लेखी सबैले सेयर गरौ